संसारको अन्त कहिले हुनेछ?
आवरण लेख ”अन्त” तर के को?
आवरण लेख अन्त कहिले हुनेछ?
आवरण लेख धेरैजना अन्तको विनाशबाट जोगिनेछन्‌-तपाईं पनि जोगिन सक्नुहुन्छ
बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ यहोवा दयालु र क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले सिकें
तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् “के म परमेश्वरको स्थानमा छु र?”
परमेश्‍वरको राज्यले के गर्नेछ?
लेखको भाषा cakchiquel (central) अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
प्रहरीधरहरा | मे २०१५
अन्त कहिले हुनेछ?
अहिले मानिसले मानिसमाथि हैकम जमाएर मानिसजातिको भविष्य नै खतरामा पारेको छ। तर परमेश्वरले सधैंभरि यस्तो भइरहन दिनुहुने छैन। शताब्दियौंदेखि संसारमा भइरहेको दुःख र अत्याचारको अन्त परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भनेर हामीले पढिसक्यौं। उहाँले कदम चाल्नुहुने समय नजिक छ भनेर तपाईंले थाह पाएको सृष्टिकर्ता चाहनुहुन्छ। तर यस्तो रहस्य उहाँले कसरी खुलाउनुभएको छ?
एउटा उदाहरण विचार गर्नुहोस्: कुनै नयाँ ठाउँमा जानुअघि त्यो ठाउँमा कसरी पुग्ने भनेर तपाईं पहिला अरू मानिसहरूलाई सोध्नुहुन्छ होला वा नक्सा अनि लेखिएका निर्देशनहरू हेर्नुहुन्छ होला। यात्रा गर्दै जाँदा तपाईंलाई दिइएको निर्देशन र बाटोमा राखिएका चिन्हहरू मिल्यो भने तपाईंको गन्तव्य नजिक रहेछ भनेर तपाईं ढुक्क महसुस गर्नुहुन्छ नि, होइन र? त्यसैगरि परमेश्वरले पनि अन्त हुनुअघि संसारमा हुने ठूलाठूला परिवर्तनहरूबारे आफ्नो वचनमार्फत बताउनुभएको छ। जब यी घटनाहरू देख्छौं तब संसारको अन्त हुने समय नजिकै छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन्छौं।
अन्तको समयमा यो संसार एउटा निर्णायक घडीमा पुग्नेछ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। मानिसजातिको इतिहासमै नभएका घटनाहरू अनि परिस्थितिहरू देखापर्नेछ। यसबारे परमेश्वरको वचनमा लिपिबद्ध केही भविष्यवाणीहरू केलाऔं।
१. विश्वव्यापी रूपमा हुने उथलपुथल: बाइबलको मत्ती अध्याय २४ मा पृथ्वीमा हुने घटनाहरूको सूची उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी घटनाहरूले “यस युगको आखिरी समयको चिन्ह” दिनुका साथसाथै त्यसपछि “यस युगको अन्त” हुनेबारे पनि बताउँछ। (पद ३, १४) बाइबलमा लेखिएका अन्तका चिन्हहरू यी नै हुन्‌: ठाउँ-ठाउँमा ठूलठूला युद्धहरू, अनिकाल, भूकम्प, दुष्टता बढ्ने अनि मानिसहरूबीचको प्रेम सेलाउने र कपटी धार्मिक नेताहरूले मानिसहरूलाई बहकाउने। (पद ६-२६) यस्ता घटनाहरू त सयौं वर्षदेखि हुँदै छ भनेर तपाईं भन्नुहोला। तर अन्त नजिकिंदै जाँदा यी सबै घटना एउटै समयमा हुनेछ। त्यति मात्र नभई तल दिइएका तीन वटा सङ्केतहरू पनि सँगसँगै हुनेछ।
२. मानिसहरूको स्वभाव: “अन्तको दिन” -को अर्को चिन्ह भनेको मानिसहरूमा फैलिने विकृति हो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। हामी यस्तो लेखिएको पाउँछौं: “मानिसहरू आफैलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसालाई प्रेम गर्ने, धाक लगाउने, अहङ्कारी, परमेश्वरको निन्दा गर्ने, आमाबाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, कृतघ्न, विश्वासघाती, स्वाभाविक स्नेह नभएका, कुनै पनि कुरामा सहमत नहुने, निन्दक, असंयमित, निष्ठुर, भलाइलाई प्रेम नगर्ने, धोकेबाज, जिद्दी गर्ने, घमन्डले फुल्ने, परमेश्वरलाई भन्दा सुखविलासलाई प्रेम गर्ने हुनेछन्‌।” (२ तिमोथी ३:१-४) हुन त मानिसले एकअर्कालाई अनादर गर्नु कुनै नौलो कुरा त होइन। तैपनि “अन्तको दिन” -मा चाहिं मानिसहरूको यस्तो स्वभावले सीमा नाघ्नेछ त्यसैले यस समयलाई “कठिन समय” भन्न सकिन्छ। मानिसहरूको स्वभाव बिग्रँदै गएको तपाईं आफैले महसुस गर्नुभएको छ कि?
३. मानिसहरूले पृथ्वीको विनाश गर्ने: परमेश्वरले “पृथ्वीका विनाशकारीहरूलाई विनाश” गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। (प्रकाश ११:१८) तर कसरी मानिसहरूले पृथ्वीको विनाश गरिरहेका छन्‌? बाइबलमा नूहको समयबारे यसरी व्याख्या गरिएको छ: “परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो।” तब परमेश्वरले त्यो भ्रष्ट समाजबारे यस्तो भन्नुभयो: ‘म तिनीहरूलाई नाश गर्नेछु।’ (उत्पत्ति ६:११-१३) पृथ्वी हिंसाले भरिरहेको प्रमाण के तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ? साथै यो संसार मानव इतिहासकै निर्णायक घडीमा आइपुगेको छ। कसरी? सारा मानिसजातिलाई नष्ट गरेर पूरै पृथ्वी विनाश गर्ने क्षमता पनि मानिसमा छ। किनभने तिनीहरूसित अहिले हरेक किसिमका हातहतियार छन्‌। मानिसहरूले अर्को तरिकामा पनि पृथ्वीको विनाश गर्दै छन्‌। मानिसहरूले प्रकृतिको दुरुपयोग गरेका कारण पृथ्वीमा जीवन सम्भव तुल्याउने प्रणालीहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। जस्तै: समुद्र, वातावरण अनि जनावर र रूख-बिरुवाको जैविक प्रणाली बिस्तारै मासिंदै गइरहेको छ।
तपाईं आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस्: ‘के सय वर्षअघि मानिसहरूसित आफैलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने शक्ति थियो र?’ थिएन। तर अहिले मानिसले वातावरणलाई ध्वस्त पार्नुका साथै अत्याधुनिक हातहतियार बनाएकोले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने शक्ति तिनीहरूसित छ। प्रविधिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसले ठूलो फड्को मारेको छ। तैपनि त्यसले ल्याएका डरलाग्दा नतिजाहरूलाई भने मानिसले बुझ्न सकेको छैन न त त्यसलाई नियन्त्रण नै गर्न सकेको छ। तर पृथ्वीमा भएका सबै जीवजीवात लोप हुनुअघि नै परमेश्वरले विनाशकारीहरूको विनाश गर्न कदम चाल्नुहुनेछ। त्यसैले पृथ्वीको भविष्य मानिसको हातमा छैन। पृथ्वीका विनाशकारीहरूलाई नाश गर्ने प्रतिज्ञा परमेश्वर आफैले गर्नुभएको छ।
४. विश्वव्यापी प्रचारकार्य: अन्तको दिनको अर्को एउटा चिन्हबारे पनि बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। त्यो हो: “सबै जातिलाई साक्षी दिनका लागि राज्यको यो सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि यस युगको अन्त हुनेछ।” (मत्ती २४:१४) यो प्रचारकार्य सयौं वर्षदेखि चलिरहेको धर्मपरिवर्तन जस्तो होइन। अन्तको दिनमा एउटा विशेष समाचारमा जोड दिइनेछ। त्यो हो, ‘राज्यको सुसमाचार।’ त्यस्तो समाचार फैलाइरहेका कुनै धार्मिक समूहलाई तपाईं चिन्नुहुन्छ? यस्तै समाचार फैलाउने कोही-कोही छन्‌ होला तर के तिनीहरूले आफ्नै ठाउँमा मात्र प्रचार गर्दै छन्‌? या ‘सबै जातिलाई साक्षी दिनका लागि सारा पृथ्वीभरि प्रचार’ गरिरहेका छन्‌?
सयौं भाषामा संसारभरि परमेश्वरको राज्यको घोषणा हुँदै छ
www.jw.org वेबसाइटमा पनि ‘राज्यको सुसमाचार’ लाई नै जोड दिएको छ। यसमा ७०० भन्दा धेरै भाषामा राज्यको सुसमाचारलाई बुझाउने प्रकाशनहरू पाइन्छ। राज्यको सुसमाचार संसारभरि फैलाउन गरिएको यस्तो प्रयासबारे तपाईंलाई थाह छ? इन्टरनेट उपलब्ध हुनुभन्दा कयौं वर्षअघि देखि यहोवाका साक्षीहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार फैलाउन गरेको प्रयासबारे प्रायः सबैलाई थाह छ। सन्‌ १९३९ देखि नै प्रहरीधरहरा पत्रिकाको हरेक अङ्कको आवरणमा “यहोवाको राज्यको घोषणा गर्छ” भन्ने शब्दहरू लेखिएको पाइन्छ। धर्मबारे एउटा किताबमा यहोवाका साक्षीहरूको प्रचारकार्यबारे यस्तो लेखिएको छ: “तिनीहरूले तीव्र गतिमा व्यापक र विस्तृत रूपमा गरेको प्रचारकार्य अतुलनीय छ।”
संसारको इतिहासको निर्णायक समय
बाइबलमा उल्लेख गरिएका अन्तको दिनको चारवटा चिन्ह तपाईंको जीवनकालमै कसरी देखापरिरहेको छ भनेर के तपाईंले याद गर्नुभयो? यो पत्रिकाले सय वर्षभन्दा अघिदेखि नै पाठकहरूलाई संसारको घटनाबारे जानकारी दिएर तिनीहरूलाई अन्त कत्ति नजिक छ भन्ने कुरा जाँच्न मदत गरेको छ। तर केही आलोचकहरूले भने यस्ता प्रमाणहरू आ-आफ्नो विचारधारा मात्रै हुन्‌ र यसलाई बङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने दाबी गर्छन्‌। तिनीहरूले जेसुकै भने तापनि हामी मानव इतिहासको विशेष समयमा बाँचिरहेका छौं भन्ने प्रमाणहरू यथेष्ट छन्‌।
पृथ्वीमा ठूलठूला परिवर्तनहरू हुनै लागेका छन्‌ भनेर केही विशेषज्ञहरू मानिलिन्छन्‌। उदाहरणको लागि मानिसजातिको अस्तित्व नै खतरामा पार्न सक्ने कुराहरू छन्‌ भनेर सन्‌ २०१४ मा विज्ञान र सुरक्षा बोर्डको एउटा समाचारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई चेतावनी दियो। ती वैज्ञानिकहरूले यसो भने: “मानिसजातिको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने कुराहरूलाई राम्ररी नियाल्दा प्रविधिले ल्याउने विपत्ति अझ डरलाग्दो हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।” संसारको इतिहासको निर्णायक घडीमा हामी पुगिसकेका छौं भन्ने कुरा थुप्रै मानिसले स्वीकारेका छन्‌। यस पत्रिकाका प्रकाशक र यसका थुप्रै पाठक अन्त सोचेभन्दा पनि नजिक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्‌। तर भविष्यको विषयमा चिन्तित हुनुभन्दा पनि अन्तपछि आउने समयबारे सोचेर हामी खुसी हुन सक्छौं। किन? किनभने तपाईं अन्तबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
विनाशको समाचार मात्र फैलाउने भविष्यवक्ताहरू?
यहोवाका साक्षीहरू विनाशको समाचार मात्र फैलाउने भविष्यवक्ताहरू होइनन्‌। सयवर्ष भन्दा अघिदेखि नै तिनीहरूले अरूलाई राम्रो समाचार सुनाइरहेका छन्‌। उदाहरणको लागि सन्‌ १९५८ मा आयोजित तिनीहरूको अधिवेशनको एउटा भाषणको शीर्षक यस्तो थियो: “परमेश्वरको राज्यले शासन गर्दै छ—के संसारको अन्त नजिक छ?” त्यस भाषणमा यसरी बताइएको थियो: “परमेश्वरको राज्य पृथ्वीलाई नाश गर्न होइन बरु सैतानको संसारलाई अन्त गर्न आउँछ। परमेश्वरको राज्यले यस पृथ्वीलाई आगोले भस्म पार्न होइन तर स्वर्गमा र पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न आउँछ। त्यसैले परमेश्वरले पृथ्वीलाई आफ्नो सृष्टिको रूपमा सधैंभरि सुरक्षित राख्नुहुनेछ।”
मे २०१५ | अन्त के को र कहिले?
प्रहरीधरहरा मे २०१५ | अन्त के को र कहिले?